Homeसमाचारकैलाश पर्वतबारे आश्चार्यजनक पाँच रहस्य
October 4, 2020 admin समाचार 12937
कैलाश पर्व’तका नाम जोको’हीले सुनेकै हुनुपर्छ । शिव पुराण, मत्स्य पुरणा, स्कन्द पु’राण अथाव भ’गवान शिवको महिमा वाचन गर्दा ‘कैलाश पर्वतको’ नाम र महि’माको ज’ताततै चर्चा हुन्छ । देव’ताका पनि देवता आर’ध्यदेव महादेव र माता पार्वतीको वासस्थान रहेको पवित्र पर्वत नै कैलाश पर्वत हो ।
पौ’राणिक ब्याख्या अनुसार यस पर्वतका चार मुखहरु स्पटिक, रुबी, निलम, र स्वर्ण श्रृं’गारको प्रतिकको रुपमा अनेकौं रत्नले सुस्व’भित मुद्रामा रहेको छ । हेमश्रीङ्ग, वैद्युत, ककुन्दमान र वरुण, श्रिङ्गवान र हिर’ण्याश्रिङ्ग जस्ता छ वटा दिब्य पर्व’तहरुको बिचमा अवीस्थत यस प’र्वतकोलाई कमलको फूलको प्रतिकको रुपमा पनि लिइन्छ ।
स्वयं भग’वान शिवलाई नै कैला’शको नामले पुकारिन्छ । यो हिन्दूधर्मको सबैभन्दा पवित्र तीर्थ’स्थल पनि हो । कैलाश पर्वत एक रहस्य’मयी पर्वत हो । जहाँ धेरै रहस्य’हरु रहेका छन् । मान’सरोवर स्थित कैलाश पर्वतमा सा’क्षात भगवान शिव विराजमान छन् भन्ने विश्वास समेत गरिन्छ ।
हिन्दू धर्मावलम्वीहरुले जीवनमा एकपटक कैलाश मानस’रोवरमा जानैपर्ने मान्यता पनि राख्दछन् । कैलाश पर्वत समुद्री स’तहदेखि २२ हजार ६८ फिट उचाईमा पर्छ । हिमा’लयको उत्तरी क्षेत्र स्थित ति’ब्बतमा रहेको छ यो हिमाल निकै मनोरम पनि छ ।
प्राचीन का’लदेखि नै विभिन्न धर्मको लागि यसको विशेष म’हत्व रहेको छ । यस स्था’नको बारेमा लेखिएका विभिन्न मत तथा लोक कथाहरुको कारण पनि यसको महत्व अझ बढी छ । पौरा’णिक मान्यता अनुसार यस पर्वतका केही रहस्य’हरु यहाँ उल्लेख गरिएको छ-
चार धर्मको तीर्थ’स्थल
कै’लाश मानस’रोवर तिब्बती बौद्ध धर्म, अरु सबै देशले मान्ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म र हिन्दू धर्मको म’हत्वपूर्ण तीर्थस्थल हो । तिब्ब’तीहरुको मा’न्यता रहेकोे छ कि यहाँ धेरै वर्ष पहिले एक सन्त कविले त्यहाँ गुफामा बसेर तपस्या गरेको थिए ।
बौद्ध भगवान बुद्ध तथा मणि पद्मा’को निवास मान्दछन् । जैन’हरुको मान्यता आदिनाथ ऋषभदेव यो निर्माणस्थल अष्टपद मान्दछन् । उनीहरुको आनुसार ऋषभदेवले आठ पाइलामा कैला’शको यात्रा गरेका थिए । कैलाश क्षेत्रलाई स्वयम्भू समेत मान्दछन् ।
नेपालको कर्णा’ली नदीको उद्गम स्थल पनि हो– कैलाश पर्वत । कैलाश पर्वतको चार दिशाबाट चारवटा नदीहरुको सुरुवात भएको छ । ती नदीहरुमा ब्रह्मपुत्र, सिन्धु, सतलज र कर्णाली । यही नदीहरुबाट नै गंगा, सरस्व’ती सहित ची’नका अरु नदीहरु पनि यही पर्वतबाट शुरु हुन्छन् ।
कैला’शको चारै दिशामा विभिन्न जनाव’रहरुको मुख जस्तो आकृति देखिन्छ । पूर्वमा अ’श्वमुख (घोडाको मुखजस्तो) रहेको छ । पश्चिममा हात्तीको, उत्तरमा सिंहको र दक्षिणमा याकको आकृति देखिन्छ ।
यस स्था’नमा सिर्फ योगी र ध्यानीहरुले मात्रै बसोबास गर्न सक्दछन् । जसलाई यस्तो वातावरणमा बस्ने आदत बसिसकेको छ । यहाँ चारैतर्फ कल्पना पनि नगरिए’का पर्वतहरु रहेका छन् । अ’धिकांश पहाडको उचाई ३५०० मिटर भन्दा माथिका धेरै हिमालहरु त्यहाँ रहेका छन्
कैला’श पर्वत या मान’सरोवर तलाउ क्षेत्रमा निरन्तर एक आवाज सुनिन्छ । ध्यानमग्न तथा एकाग्र चित्तले सुन्ने हो भने यहाँ डमरू र ॐ को आवाज सुनिन्छ । वैज्ञानि’कहरुका अनुसार यो आवाज हिउ पग्लिएर आए’को मान्दछन् । यस्तो पनि मान्यता राखिन्छ कि प्रकाश र ध्वनिकाे समा’गमबाट यहाँ ‘ॐ’कारको ध्वनि सुनिएको हुनसक्छ ।
यति मान’वको रहस्यः
हिमालय’वासीको भनाइलाई मान्ने हो भने यहाँ यति मानव पाइन्छ । कोई यसलाई हिमाली भालू समेत भन्ने गर्छन् भने कसैले जंगली मानव या हिम मानव पनि भन्छन् । यो धा’रणा समेत राखिन्छ कि यति मानवले मान्छेला’ई मारेर खान्छ । केही वैज्ञानि’कहरु भने यसरलाई निडर स्थल मानव मान्दछन् । अधिकांश वैज्ञानि’कहरुको दाबी के छ भने हिमालयको बाक्लो हिउ भएको क्षे’त्रमा हिम मानव हुन्छन् ।
दुई रहस्य’मयी ताल
यहाँ २ रहस्य’मयी ताल (सरोवर) छन । एउटा मानसरोवर र दोस्रो राक्षस नामको ताल । मानस’रोवर दुनियाको शुद्ध पानीको उच्चतम ताल मध्यको एक हो । जसलाई सूर्य’समान मानिन्छ । दोस्रो राक्षस नामक ताल जहाँको पानी पवित्र मानिदैन । यसलाई चन्द्रमासँग तुलना गरिन्छ । यी दुबै ता’लको सम्ब’न्ध सूर्य र चन्द्रमासँग जोडिएको छ । जसले सका’रात्मक र नकारात्म’क ऊर्जा दिने विश्वास गरिन्छ । – खबरहब बाट
मोटी देखेर श्रीमानले छाडे, वजन कम गरेर बनिन् देशकै सबैभन्दा सुन्दर युवती
February 26, 2022 admin समाचार 2658
अण्डा पहिले आयो कि कुखुरा? पत्ता लाग्यो यसको पनि रो’चक रहस्य (भिडियो हे’र्नुहोस्)
पहिला अण्डा आयो कि कु’खुरा भनें विषयमा प्राचीन समयदेखि नै विभिन्न प्रकारको बहस सुरु हुँदै आएपनि कसैको एकमत भने थिएन । कुखुरा पहि’ला आएको वा अण्डा पहिला आएको सवालले वैज्ञा’निक तथा दर्शनशास्त्रीहरूको अहिलेसम्म पनि दिमाग
उपचार पछि मोडल निशा घिमिरेको अनुहारमा देखियाे यस्तो चमक !
June 11, 2021 admin समाचार 5432
इटहरी / नर्भिक अस्पतालमा उपचार सुरु भ’एपछि मोडल निशा घिमिरेको अनु’हारमा चमक देखिएको छ । जीवन मरणको दोसाधमा रहेकी उनको अस्पतालको बेडबाट ताजा तस्वीर सार्ब’जनिक भएको छ । जस्मा उनी मन्द मुस्कु’राईरहेको महसुस गर्न सकिन्छ